Durtii dhaan, LibreOfficeniin faayiloota dhangiiwwan faayilii GalmeeBanuu keessatti fe'uu fi olkaa'uu.
Maqoolee dhangiiwwan faayilii GalmeeBanuu
Qajojii Barruu ODF
Galmee Hundataa ODF
Qajojii Galmee HTML
Qajojii Waraqaadiriiroo ODF
Qajojii fakkasaa ODF
Qajojii dhiheessa ODF
Dhangiin HTML dhangii GalmeeBanuu tii miti.
Taattoon ODF maqaa dhangii faayilii taatoowwan kophaa dhaabbataniit. Dhangiin dheertoo *.odc wajjinii kun amma faayidaa kennaa hin jiru.
Dhangiin BarruunBani sa`atii irra darbaa ofkeessatti qabata.
OpenOffice.org 3 or StarOffice 9
OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 keessatti, ODF 1.2 (default) ykn ODF 1.0/1.1 (for backward compatibility) gargaaramuun galmeewwan olkaa`uuf filuu ni dandeessa. Meeshaalee - Dirqaalee - Fe`i/Olkaa`i - Waliigala fi dhangii ODF fooyya`aa fili.
Yoo galmeewwan itti fayyadamtoota waliin hanga gargaaramuu OpenOffice.org 1 or StarOffice 7 waljijjiiruu barbaade, galmee maqaa gingilchaa duraa duubaan sanduuqa tarree Akaakuu faayilii keessa olkaa`i.s
Caasaa faayilii XML
Galmeewwan dhangii faayilii GalmeeBani keessatti akka furtuu wallitti qabamee faayilii XML ofkeessatti qabatuu olkaa`amu. Faayiloota XML kana ilaaluuf, faayilii GalmeeBani sagantaa hin qolofamneen banuu dandeessa. Faayilootnii fi galeelota kanneen armaan gadii Faayiloota GalmeeBani kassatti qabamu:
Qabeentoon barruu galmee content.xml keessatti argama.
Faayileen meta.xml galmee odeeffannoo meetaa qabaatu, Kan Faayilii - Amaloota jalatti saaguu dandeessa.
Yoo galmee iggita wajjin olkeesse, meta.xml hin hicciteeffamne.
Faayiliin settings.xmlodeeffannoo baay'ee waa'ee qindaa'inaa galmeef qabaata.
Faayiliin meta-inf/manifest.xml caasaa faayilii XML ibsa.
Faayiloonni fi ukaankonni dabalataa dhangii faayilii qarqaba keeessatti qabamuu danda'a.
Qindaa'ina dhangiiwwan XML
Squariin dhangilee GalmeeBanuu iddoo saphaphuu www.oasis-open.org irratti argamuu danda'a.
Masaka jijjiiraa galmee
Title is: Dhangiiwwan Faayilii XML